Global Voices teny Malagasy » Andro Fahatsiarovana Erantany ilay Famonoana Faobe : Auschwitz an-tsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Marsa 2020 7:11 GMT 1	 · Mpanoratra Metamorphosis Foundation Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Albania, Alemaina, Belarosia, Bolgaria, Bosnia Herzegovina, Estonia, Hongria, Italia, Kosovo, Kroasia, Letonia, Litoania, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Okraina, Polonina, Repoblika Tseky, Romania, Rosia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ady & Fifandirana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Zon'olombelona
Olona avy amin'ny fianakaviana Yogoslavy Mandić (Oleg, 11 taona tamin'izany fotoana izany, ny reniny, Nevenka sy ny renibeny Olga) miaraka amin'ireo miaramila sovietika tao Auschwitz taorian'ny nanafahana ilay toby tamin'ny 27 Janoary 1945. Loharano: znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny masoivohom-baovao Meta.mk , tetikasa iray an'ny Orina Metamorphosis. Ny dika nasiana fanovàna eto ambany kosa dia ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
27 Janoary, nambaran'ny Firenena Mikambana ho Andro Erantany Fahatsiarovana ny Famonoana Faobe, famonoana nataon'ny fitondrana Nazi sy ireo nifanome tànana taminy an'ireo Jiosy maherin'ny 6 tapitrisa sy 11 tapitrisa hafa, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Tamin'io andro io, ny taona 1945, no nafahan'ny Tafika Mena i Auschwitz-Birkenau, ilay toby Nazi goavana indrindra.
Auschwitz  dia toerana iray maro sosona misy toby fanibohana sy famonoana niisa 40 mahery teo ambany fitantanan'ny Nazi alemàna, tao anatin'ny Polonina nobodoiny, nanakaiky ny tanànan'i Oświęcim. Tamin'ireo olona 1,3 tapitrisa nalefa tao Auschwitz hatramin'ny fotoana nisokafany tamin'ny May 1940, olona 1,1 tapitrisa no maty novonoina taminà entona misy poizina, tsy fanomezana sakafo, harerahana, aretina, famonoana na fidarohana , ary nanaovana fanandramana medikaly.
Tao amin'io toby famonoana io fotsiny, Jiosy niisa 960.000, Poloney tsy Jiosy niisa 74.000, Roms 21.000, Sovietika gadra an'ady niisa 15.000, ary Eorôpeàna hafa niisa 15.000 no maty novonoina tao.
Nentina tao Auschwitz taminà fiarandalamby manokana ny ankamaroan'ireo gadra, tanaty fiarandalamby fitondràna biby fiompy izay zara raha nisy mololo naharakotra ny gorodona.
Ny sary eto ambany dia fananan'ireo tranombakoka marobe tao amin'i Yogôslavia fahiny ary navadiky ny Znaci.net  ho lasa tahiry nomerika ety anaty aterineto.
Gadra taterina ho any aminà toby Nazi famonoana faobe, anaty fiarandalamby nampiasaina tany aloha ho fitaterana biby fiompy. Sary an'ny znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Vehivavy sy ankizy mitondra ny marika kintan'i Davida, fepetra noteren'ny Nazi hamantarana ireo Jiosy, mijoro eo akaikin'ny gara ao Auschwitz. Sary an'ny znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Ilay toerana maro sosona fanibohana sy famonoana faobe tao Auschwitz dia voahodidina fefy ahitàna andry vita simenitra sy tariby misy nifinifiny nasiana herinaratra mahafaty. Gadra 114 monja no nahavita nandositra avy ao amin'ilay toerana tamin'ny fotoana nampiasàna azy.
Aorian'ny fivoahan'ireo gadra avy any anaty fiarandalamby, saratsarahan'ireo mpiambina ny lahy sy ny vavy ary atambatra amin'ny vehivavy ny ankizy.
Fefy misy nifinifiny sy herinaratra, vita tamin'ny simenitra, tao amin'ilay toby fanibohana tao Auschwitz, notahirizina ho toy ny singa tahirin'ny Tranombakoky ny Fanjakana ao Auschwitz-Birkenau . Sary an'ny znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Aorian'izay, sarahan-dry zareo tsy hiaraka amin'ireo mbola afaka miasa ny marary sy ny manana fahasembanana. Maro tamin'ireo marary sy nanana fahasembanana no nalefany tany amin'ireo efitrano famonoana amin'ny alàlan'ny entona, talohan'ny nandraketana azy ireny tao anatin'ny bokin'ilay toby, izay no antony mbola tsy ahafantarana ny tena isa marina sy ny mombamomba ireo niharan-doza.
Nomena fikarakaràna manimba tanteraka ny maha-olona ireo voafantina hanao asa an-terivozona, isan'izany ny fametahana tombokavatsa misy laharam-pamantarana, ny fikakasana ny volon-doha ary ny fangiazana izay fananana kely teny aminy, toy ny akanjo, izay nosoloina fanamiana mitsipitsipika.
Ireo singa avy amin'ny vatan'ny olona maty koa dia nampiasaina tamin'ny resaka varotra. Nampiasaina hamokarana fitafy ny volo, navadika ho fahatsiarovana mahatsiravina ny taolana sy ny hoditra. Noterana ireo gadra hisava ny faty hitady nify volamena na zavatra hafa nafenina tany anatin'ny vatana.
Endrika hafa amin'ny fanararaotana tafahoatra ny nampiasàna ireo gadra taminà andrana mahafaty, toy ny fanandramana fitaovampiadiana mahafaty marobe sy ny fomba atao hampandrosoana ny ideolojia mpanavakavaky ny Nazi.
Ny fanariana ireo taolambalon'ny niharam-bono no tena fanamby goavana natrehan'ilay ozinin'ny famonoana teo an-tànan'ny Nazi. Dimy ireo toerana fandoroana faty naorina ary tsy maty afo 24 ora isanandro ny memy tao aminy tao Auschwitz-Birkenau. Matetika ilay toby no nifono setroka natevina be — ireo sisampaty taty aoriana nilaza fa nisy fotoana tsy nahitan-dry zareo ny masoandro efa ho am-bolana maro.
Talohan'ny nanesorana ilay toby, tany amin'ny akaikin'ny Noely 1944 tany, napoakan-dry zareo Nazi ilay toerana mba hanafenany ny loza amin'antambo nataony tao.
Fiantsoana ny anaran'ireo vehivavy gadra vaovao vao tonga tao amin'ilay toby fanibohana tao Birkenau. Sary an'ny znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Nalaina teny amin'ireo gadra avokoa ny fananany ary nentina napetraka tao amin'ny efitrano iray tao an-toby nantsoina hoe “Canada” Sary an'ny znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Ny “Block 10″ tao amin'ny toby fanibohana tao Auschwitz, toerana fanaovan'ireo Nazi dokotera mpanao andrana amin'ny olombelona. Sary an'ny znaci.net, sehatra ho an'ny daholobe.
Ireo Nazi nitsoaka dia nitondra gadra vitsivitsy niaraka tamin-dry zareo hanatontosa ny diaben'ny fahafatesana izay ny tanjona dia ny hamela azy ireny ho fatin'ny hainandro sy ny hanoanana eny an-dàlana. An'arivony maro no nijanona na niverina tao an-toby, ka nahita sakafo tany anatin'ireo trano fametrahana entana. Na izany aza, iray tamin'ny dimy no maty talohan'ny nahatongavan'ny Sovietika andro maro taty aoriana.
Gadra manodidina ny 4.800 no navotan'ny miaramilan'ny Tafika Mena avy ao Auschwitz. Isan'izy ireny ireo Yogoslavy 108, nahitàna ireo mpikambana avy amin'ny fianakaviana Mandić. Izy ireny dia avy any Rijeka, Kroasia, izay tanàna voalohany nobodoin-dry zareo Italiàna fasista ary avy eo indray ry zareo Nazi nandritra ny ady.
Tamin'ny May 1944, i Oleg Mandić, 10 taona, no nosamborin'ny Nazi niaraka tamin'ny reniny sy ny renibeny. Nanatevina laharana ny mpihoko ny rainy sy ny raibeny – ny tafiky ny Yogoslavy kaominista mpanohitra ny fasista. Rehefa nandany volana marobe tany am-pigadràna tao Kroasia sy Italia, nalefa toy ny hoe “gadra pôlitika” tany Auschwitz ry zareo. Sisampaty avy any amin'ilay toby fanibohana ry zareo, volana valo taty aoriana.
Volana roa no lanin'i Oleg niasàna tao amin'ny faritra natokana ho an'ireo vehivavy, saingy rehefa hitan'ireo Nazi fa feno 11 taona izy, nafindran'izy ireo ho any amin'ny toerana natao ho an'ny lehilahy. Rehefa nahitàna soritraretin'ny tazo vokatry ny rarintsainy, nalefa ho any amin'ny faritra misy ny toerana fitsaboana fanaovan'ilay manamboninahitra SS Josef Mengele  andrana. Nandritra ireo herinandro maro tao, nianarany ny nikirakira ny fakàna hafanàna ary namorona tetikady hafa izy mba hitoetra mandrakariva amin'ny maha-olona ilaina arahana maso.
Oleg Mandić, ny reniny Nevenka, sy Olga renibeny no gadra velona nandao farany an'i Auschwitz.
Ny lahatsary etsy ambany, izay sambany hitan'i Mandić nandritra ny fitsidihana iray natao tao Auschwitz, 20 taona taty aorian'ny nanafahana azy, no mampiseho ny fotoana nandraisan'ilay fianakaviana ny taratasy iray nalefan'i Nikolai Bulganin,  tànan-kavanan'i Staline nanome baiko ny hitaterana azy ireo ho any Maosko ao anaty fiarabe iray mandalo an'i Krakow. Tao amin'ny renivohitra sôvietika, namonjy andiana Yogoslavy mpitsidika ry zareo, notarihan'ilay mpitarika ny mpanohitra Josip Broz Tito, izay nandray fiaramanidina ny 1 May 1945 niverina niaraka tamin-dry zareo ho any Belgrady.
Mandić, izay 86 taona ankehitriny , dia nanokana ny fiainany ho amin'ny fampahafantarana ny marina momba ilay Famonoana Faobe. Nitarika ONG iray manohitra ny fasista izy tao Opatija, Kroasia, nikarakara fampirantiana, ary nanao famelabelarana sy antsafa tamin'ny fiteny samihafa.  Nandraisany anjara ihany koa ireo andiana fitsidihana isantaona mankany amin'ny tranombakoka ao Auschwitch rehefa tonga ny andro fahatsiarovana ny nanafahana ilay toby.
Tamin'ny 2015, nandritra ny fankalazana ny faha-70 taonan'ny fanafahana, nolazainy fa mbola mangorintsina foana izy rehefa mieritreritra momba “ny fisainan'olombelona iray manokan-tena hanao famokarana indostrialy ny fahafatesana.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/03/31/146759/
 masoivohom-baovao Meta.mk: https://meta.mk/en/international-holocaust-remembrance-day-auschwitz-in-pictures/
 mpikambana avy amin'ny fianakaviana Mandić. : https://balkaninsight.com/2015/01/27/boyhood-memories-of-auschwitz-70-years-on/?lang=EN
 manamboninahitra SS Josef Mengele: https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
 Nikolai Bulganin,: https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Bulganin
 izay 86 taona ankehitriny: https://www.youtube.com/watch?v=SKt7CRXTK6g
 fiteny samihafa.: https://www.youtube.com/watch?v=9XmyRpvXrXc